“Rabbigu wuxuu ina siin doonaa waxa wanaagsan, oo dalkeennuna wuxuu soo bixin doonaa midhihiisa.”—SABUURRADII 85:12
Ilaahay wuxuu nebi Ibraahim ka ballanqaaday inuu mid ka mid ah farcankiisa “quruumaha dunida oo dhammu” barakooyin u keeni doono. (Bilowgii 22:18) Farcankaas waa ayo?
In ku dhow 2,000 kun oo sano ka hor, Ilaahay wuxuu siiyay nebi Ciise oo ahaa farcankii Ibraahim, awoodda uu ku fuliyo mucjisooyin waaweyn. Mucjisooyinkaas waxay muujiyeen inay ballantii Ibraahim loo ballanqaaday ay quruumaha ku soo gaari doonto Ciise.—Galatiya 3:14.
Ciise mucjisooyinkuu sameeyay waxay dadka u caddeeyeen inuu isaga ahaa midkuu Ilaahay u doortay inuu aadanaha ku barakeeyo. Waxay kaloo ina tuseen siduu Ilaahay mustaqbalka Ciise u adeegsan doono siduu binuʼaadanka weligood u barakeeyo. Bal eeg siday mucjisooyinkii Ciise inoogu muujiyeen dabeecaddiisa soo jiidashada leh.
Kalgacaylnimo—Ciise wuxuu bogsiiyay kuwii jirranaa.
Maalin, nin baras qaba ayaa Ciise ka baryay inuu bogsiiyo isagoo leh: “Haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa.” Ciise intuu taabtay ninkii ayuu ku yiri: “Waa doonayaa.” Kolkiiba wuu bogsaday.—Markos 1:40-42.
Deeqsinimo—Ciise wuxuu quudiyay kuwii gaajaysnaa.
Ciise ma doonaynin inay dadku gaajoodaan. In ka badan hal jeer, wuxuu si mucjiso ah u quudiyay kumanyaal qof, isagoo u badinaya dhowr xaabo oo kibis iyo kalluun ah. (Matayos 14:17-21; 15:32-38) Markay dadkii dhammaantood wax cuneen oo wada dhergeen, cunto aad u badan ayaa soo hadhay.
Naxariis—Ciise wuxuu soo nooleeyay kuwii dhintay.
Ciise wuxuu aad ugu “naxariistay” carmal murugaysan oo lahayn qof kale. Wiilkeedii keliya oo ka dhintay buu u soo sara kiciyay.—Luukos 7:12-15.
BARAKOOYINKA WELIGOOD AH EE DUNIDA
Ciise wuxuu horey u muujiyay in Ilaahay awood u leeyahay inuu barakeeyo aadanaha. Mar dhow, sida la ballanqaaday, markuu Ciise soo noqdo, Ilaaha Qaadirka ah ayaa isaga adeegsan doono inuu adduunka oo dhan ku fuliyo mucjisooyin ka sii waaweyn kuwii hore.
Sidee dunida ahaan doontaa markuu Ilaahay oofiyo ballamihii uu nebi Ibraahim u ballanqaaday? Kuwa Ilaahay jacayl oo ixtiraama “dalkay dhaxli doonaan, oo waxay ku farxi doonaan nabad badan.” (Sabuurradii 37:11) “Dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona.”—Muujintii 21:4.
Waxay ahaan doontaa barako aad u weyn inaan weligeen adduun nabad badan ku noolaano! Bal aad www.jw.org sidaad wax kale uga sii bartid barakooyinka dhowaan maammulka Ilaahay la iman doono.
Wadaag Wadaag Weligaa Hel Barakooyinka Ilaahay
wp20 Lambar 3 bogag 14-15